मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ - Karobar National Economic Daily
मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ
query_builderApril 24, 2017 11:37 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility836
सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने भद्र सहमति भएको छ । यसले मुलुकको राजनीतिक द्वन्द्व समाधान हुने आशा पलाएको छ ।
राजनीतिक द्वन्द्व समाधानसँगै मुलुक आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने अपेक्षा पनि धेरैको छ । सरकार र मोर्चाबीचको भद्र सहमति कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तहको संख्या केही बढ्नेछ भने स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत दुई चरणमा हुनेछ । निर्वाचनपछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाउनेछन् । यसबाट तत्कालको राजनीतिक द्वन्द्व समाप्त भई मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ लम्कने आशा पलाएको छ ।
मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान विशेष गरी मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको रणनीति के छ ? मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन उनीहरूले अब कस्तो पहल गर्छन् ? यसै सन्दर्शमा मधेसकेन्द्रित दलका नेता तथा बुद्धिजीवीहरूसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानी :
दर्शन र नीतिको कुरा मात्र गरेर हुदैन
शरतसिंह भण्डारी, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी
हामी सबैले कल्पनाशीलताको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । यसलाई सबैले स्वीकारसमेत गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्वकर्ताहरूले राजनेताको दृष्टि (भिजन) लाई तीखो पार्ने हो भने हाम्रो एजेन्डा भनेको जनताको आर्थिक समृद्धि नै हुनुपर्छ, राजनीति होइन ।
संसारका सबै मुलुक यसैगरी अघि बढेको पाइन्छ । अहिले दर्शन र नीतिको कुरो गरेर मात्र हुँदैन । कुन साम्यवाद, कुन समाजवाद, कुन पुँजीवादको वकालत गर्ने हो हामी ? अहिले आमजनताका लागि दुई छाकको गर्जो टार्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बेला हो । मुलुकको आवश्यकता आर्थिक नीति हो । तर, हामीमध्ये कुनै पनि नेताले यसमा गम्भीर ध्यान दिन सकेका छैनौं । हामीले आर्थिक नीतिमा सहमति नखोजी हुन्न ।
आर्थिक नीतिका आधारमा हामीले दुई–चारवटा ठूला योजना तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले राजनीतिक सहमतिलाई एक बिन्दुमा पु¥याएका छौं । ठूला–ठूला दुई–चारवटा योजना अगाडि बढाइए त्यसपछिको राजनीति आफैं ठीक ठाउँमा आउँछ, जुन अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता हो । अर्को कुरा, सरकारको स्थिरता पनि एउटा आवश्यक कुरा हो । उदाहरणका लागि भनौं भने म पर्यटनमन्त्री भएका बेला पर्यटन वर्ष मनाएर हामीले ८ लाख पर्यटक भिœयाएका थियौं । तर, त्यसको नीतिगत निरन्तरता देखिएन ।
त्यसैले अपेक्षा गरेको प्रतिफल हासिल गर्न सकिएको छैन । स्थिर सरकार भएर त्यसको निरन्तरता भएको भए पर्यटन क्षेत्रमा ठोस प्रतिफल पाउन सकिन्थ्यो । त्यसले तल्लो तहका जनतामा प्रतिफल पु-याउन सक्थ्यो, तर त्यस्तो भएन ।नीति–निर्माता र नीतिको निरन्तरताको अभावमा राजनीति मारमा पर्छ । सरकारमा आउने–जाने भइरहन्छ तर नीतिगत निरन्तर त हुनुप-यो नि ।
अहिले आर्थिक गतिविधि भनेको लगानीको सुरक्षामा टिकेको छ । लगानीको सुरक्षाका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिगत सुरक्षा हो । लगानी सुरक्षाको अभावमा कोही पनि हाम्रो मुलुकमा लगानी गर्न आउँदैन । लगानी आउँदैन भने आर्थिक गतिविधि बढ्दैन । आर्थिक गतिविधि भयो भने बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, जसले मुलुक आर्थिक रूपमा फड्को मार्न सक्छ ।
मधेसका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ अधिकारविहीन र विपन्न पारिएका समुदायको बहुलता छ । त्यसलाई राजनीतिक रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक वादविवाद र बहस हुँदै आएका छन् । व्यवस्था फेरिँदै पनि गएको छ । दुर्भाग्य सत्तामा पुग्नेहरूको मुहार फेरिने गर्छ, विभिन्न व्यक्ति, समूहको आर्थिक हैसियत फेरिने गर्छ । तर, मुलुकको आर्थिक मुहार फेर्न सकिएको छैन ।
विज्ञहरूले पनि आर्थिक एजेन्डा नेपाली राजनीतिको प्राथमिकतामा नपरेको बताइरहेका छन् । नेतृत्वको कल्पनाशीलता र दूरदृष्टिको कमीले आर्थिक एजेन्डा नै ओझेलमा परेको छ । मुलुकबाट दिनहुँ १५ सयको हाराहारीमा रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ । युवा बिदेसिएको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ । यसमा हामी मात्र होइन, कुनै पनि दलका नेता गम्भीर भएको मैले पाएको छैन ।
छाक टार्नकै लागि बिदेसिने युवाका विषयमा छलफलसम्म हुन नसक्नुले हाम्रा नेताको आर्थिक समृद्धिको प्राथमिकताबारे प्रस्ट हुन्छ । राजनीतिक द्वन्द्वलाई हामीले सक्दो चाँडो समाधान गर्न चाहेका छौं । राजनीतिक द्वन्द्व समाधान भए चाहेर÷नचाहेर मुलुकले अंगीकार गर्ने आवश्यक आर्थिक नीतिको निक्र्योल हुनेछ । अहिलेसम्म गम्भीर नभएका दलहरूलाई यसमा ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । विगतमा भए–गरेका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।
हामी विभिन्न दल मिलेर पार्टी एकीकरण गरेका छौं । सरकारले राजनीतिक एजेन्डालाई समाधान गर्ने इमानदारिता देखायो भने हामीले आ–आफ्ना आर्थिक एजेन्डालाई एकआपसमा मिलाएर ठोस नीति निर्माण गर्छौं । त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिको खोजी गरिन्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि समान अर्थनीति बनाउने विषयमा सहमति नखोजिएसम्म एउटा सरकारले ल्याएका योजना अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने कुसंस्कार रहिरहन्छ ।
विश्वलाई हेर्नुभयो भने सरकार फेरिनु सामान्य विषय हुन्छ । विशेष गरी विकसित देशलाई हेर्ने हो भने सरकार फेरिँदै गए पनि मूल नीतिगत निरन्तरता भने कायमै रहेको पाइन्छ । नेपालमा भने सरकार फेरिएसँगै आर्थिक नीति पनि फेरिने चलनले आर्थिक विकासमा बाधा पु-याइरहेको छ ।
आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न द्वन्द्वको धराप नष्ट गर्नुपर्छ
सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नेता, राष्ट्रिय जनता पार्टी
मुलुक द्वन्द्वको भुमरीमा फसेका बेला आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नु गफ चुट्नुजस्तै हो । हामी मधेसी मोर्चामा आबद्ध ६ राजनीतिक दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाएका छौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाइसकेपछि सत्तारूढ दलसँग भएको छलफल सकारात्मक छ । तर, त्यसका लागि हामीले लिखित सम्झौता केही गरेका छैनौं । विगतका ५० औं सम्झौताको वेवास्ता गरिएकाले यसपटक सरकारसँग भद्र सहमति गरेका छौं ।
भद्र सहमतिका क्रममा सरकारले परिमार्जनसहितको संशोधन प्रस्ताव सदनबाट पारित गराउने विश्वास दिलाएको छ । सरकारले विश्वास दिलाएर मात्र पुग्दैन । हामीसँग भएको भद्र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सदनबाट पारित गराउनुपर्छ । प्रस्ताव सदनमा पारित नभएसम्म हामी चुनावमा भाग नलिने प्रस्ट भनिसकेका छौं । सरकारले हप्ता–दस दिनमा संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने भनेर दिएको आश्वासनअनुसार काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
अहिले हामीले ससर्त आन्दोलन स्थगित गरेका छौं । सरकारले फास्टट्र्याकबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने भनेकाले हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले चाह्यो भने यो काम एकै दिनमा पनि हुन सक्छ । यत्रो ठूलो संविधान त सरकारले तीन दिनमै बनायो, त्यसको गणितीय हिसाबले त परिमार्जनसहितको संशोधन गर्न १० दिन त धेरै भयो ।
सरकारले सीमांकनका लागि बनाइने शक्तिशाली आयोगको संरचना भद्र सहमति अनुसार हुने हो वा होइन त्यो सवाल मुख्य हो । त्यसैगरी स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने विषय छ । स्थानीय तह बढाएअनुसारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् ।
मीले त्यसलाई पर्खिएर बसेका छौं । भद्र सहमतिको कार्यान्वयन गरेपछि अहिलेको राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान हुन्छ; अर्थात् द्वन्द्व वृद्धिको प्रवृत्तिलाई यसले रोक्छ । देशमा शान्तिको वातावरण तयार हुन्छ । शान्तिको वातावरण आर्थिक गतिविधिका लागि मुख्य विषय हो । सरकारले सकारात्मक ढंगले काम गर्दै गए हामी आर्थिक एजेन्डालाई मूर्त रूप दिने काममा अघि बढ्छौं ।
हामी एकीकृत भएका ६ वटै दलसँग आ–आफ्ना आर्थिक एजेन्डा थिए । त्यसलाई स्थानीयकरण गरे स्थानीय चुनावमा जान्छौं । यसका लागि सरकारले गर्ने कामले मात्र पुग्दैन । जनताले पनि हामीलाई बढीभन्दा बढी शक्ति दिएर जिताउनुपर्ने हुन्छ । जनताले हामीलाई विगतको चुनावमा सानो शक्ति बनाए । त्यो सानो शक्तिलाई आफूहरूले सदनमा ठूलो शक्ति बनाउन सकेका छौं ।
हिजो ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान भन्ने दलहरू नै अहिले संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा आएका छन् । जनताले आन्दोलनमा सघाएर मात्र पुग्दैन । बढीभन्दा बढी शक्ति दिएर पठाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक समृद्धिको कुरा सरकारको इमानदारितामा भर पर्ने विषय हो । समाजमा शान्ति स्थापना प्रमुख विषय हो । उद्योगी–व्यवसायीले गर्ने गरेको आग्रह भनेको बन्द–हड्ताल हुनु हुँदैन । तर, राजनीतिक संक्रमण समाधान नभएसम्म बन्द–हड्ताल भइरहन्छन् ।
राजनीतिक शान्तिको वातावरण निर्माण भए उद्योगी–व्यवसायीले सञ्चालन गर्ने आर्थिक गतिविधि निर्वाध रूपमा अघि बढ्छ । आर्थिक गतिविधि निर्वाध अघि बढे सेवा र वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । यसले देशको आर्थिक वृद्धि गराउनुका साथै जनतामा पनि प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । ठोस आर्थिक एजेन्डा बनाउन हामी सरकारबाट भएको भद्र सहमति कार्यान्वयनलाई पर्खी बसेका छौं ।
त्यो भनेको अरू केही होइन, परिमार्जनसहितको संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनबाट पारित हुनु हो । सदनबाट प्रस्ताव पारित नभए हामी चुनावमा भाग लिँदैनौं । राजनीतिक स्थिति फेरि द्वन्द्वको धरापमा फस्न पुग्छ । आर्थिक समृद्धिको रेललाई निर्वाध गतिमा बढाउन द्वन्द्वको धरापलाई नष्ट गर्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिक द्वन्द्व समाधानपछि आर्थिक गतिविधि बढ्छ
राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच राजनीतिक सहमति भएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर सहमति कार्यान्वयन महŒवपूर्ण विषय हो । आर्थिक समृद्धिको एजेन्डाबारे अहिले नै भन्ने बेला आइसकेको छैन । अहिले हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको जहाँबाट हामी प्रतिनिधित्व गर्छौं, त्यहाँको राजनीति मागलाई सम्बोधन गराउनु हो ।
हाम्रो प्राथमिकतामा मधेस थरुहटका जनतालाई विशेष रूपमा अधिकार सम्पन्न गराउनु रहेको छ । हामीले ६ पार्टीको एकीकरण गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी बनायौं । त्यसपछि सरकारसँगको छलफलमा बस्यौं । त्यो छलफलमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ । सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि समय माग गरेको छ ।
हामीलाई क्षेत्रीयतावादी भनेर आरोप लगाउने गरिएको छ । हामी जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छौं त्यस ठाउँलाई प्राथमिकतामा राख्नेबित्तिकै क्षेत्रीयतावादी हुने होइन । अर्को कुरा हामी जुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छौं, त्यो क्षेत्र कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी छ । हामीले विभेदमा परेका हरेक क्षेत्र र समुदायका लागि आवाज उठाइरहेका छौं । सिंगो मधेसमा देशको आधा जनसंख्या बस्छ । विभेदमा परेका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिलगायत विपन्नहरूको जनसंख्याको हिस्सा त झन् दुईतिहाइभन्दा धेरै छ ।
उनीहरूको आवाज हामीले उठाएका छांै । संघीयताको कुरा उठाउँदा मधेसीको माग भन्ने गरिन्छ । समावेशी कुरो उठाउँदा मधेसीको कुरो ग-यो भन्ने गरिन्छ । तर त्यसो होइन । हामीले उठाएका एजेन्डा मधेसीका लागि मात्र होइन, यो देशकै एजेन्डा हो । यहाँ फरक मात्र के हो भने ती एजेन्डा उठाउने व्यक्ति मधेसी भए ।
मधेसीले उठाउँदैमा मधेसको मात्रै एजेन्डा हो भन्न कहाँ मिल्छ ? बरु केही पार्टीले जातको राजनीति गरिरहेका छन् । हामीले उठाएको एजेन्डा राष्ट्रिय हो । त्यसैले हामीलाई क्षेत्रीयतावादी भन्नु सही होइन । राजनीतिक एजेन्डाको प्राप्तिले द्वन्द्वको समाधान गर्छ । द्वन्द्वको समाधान भएपछि आर्थिक गतिविधि गतिशील भएर अगाडि बढ्छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीमा आबद्ध भएका सबै दलसँग आर्थिक एजेन्डा छन् । ती सबैको अध्ययन गरिनेछ । अध्ययनपछि हामीले नयाँ पार्टीका लागि ठोस आर्थिक एजेन्डा तय गर्छौं । अहिले हामीले चुनावको तयारी नै गरेका छैनौं । आन्दोलनको तयारीमा थियौं । सरकारले हामीसँग गरेको अलिखित सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउँछ भने हामी चुनावमा जान्छौं ।
सहमति भएकाले चुनावमा जाने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसअनुसार हामीले आर्थिक एजेन्डा तय गर्छौं । अहिले स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन सहमत भएका छौं ।
हामीसँग भएका राष्ट्रिय मूल एजेन्डाका साथमा केही स्थानीय एजेन्डा तय गर्छौं । राष्ट्रिय एजेन्डालाई स्थानीयकरण गरी आर्थिक एजेन्डा बनाउने काम हुन्छ । त्यसैले यसबारे थप छलफलको आवश्यकता छ ।
घोषणापत्रमै आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनेछौं
भारतेन्दु मल्लिक, महामन्त्री, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम पार्टी
स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमलगायतका समुदायका माग संविधान संशोधन गरी समावेश गर्नु आवश्यक छ । संविधान संशोधन गरी स्थानीय चुनावको राजनीति अगाडि बढ्यो भने हामी चुनावको तयारी गर्दै आएका छौं । यसका लागि हामी आर्थिक समृद्धिका एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिन सक्रिय छौं । एकीकरणपछि हाम्रो पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी बनेको छ ।
त्यसको घोषणापत्र बनाउने काम जारी छ । केही दिनभित्रै हामीले त्यसलाई पूर्णता दिन्छौं । हामीले आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय रूपमा देशबाट भइरहेको युवा पलायन रोक्न रोजगार वृद्धिको विषय, कृषिक्षेत्रको उपज बढाउन, पर्यटनलाई विस्तार गर्न आवश्यक नीति निर्माणमा जुटेका छौं । यी मूल आर्थिक एजेन्डाका साथमा स्थानीय मुद्दालाई मिलाउनेछौं ।
अहिले स्थानीय चुनाव गर्न राजनीति सहमति बन्दै गएको छ । भौतिक पूर्वाधारसहित आर्थिक समृद्धिलाई टेवा पुग्ने खालको नीति बनाउन विशेष ध्यान दिइएको छ । कृषि पैदावारलाई बजारसम्मको पहुँच पु-याउने खालका पूर्वाधारका क्षेत्रलाई ध्यान दिइएको छ । रोजगारी वृद्धिका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन हाम्रो ध्यान गएको छ ।
हामीले बनाउन लागेको घोषणापत्रमा केही आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, आवश्यकता र सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, ग्रामीण बेरोजगारीलाई वृद्धि हुन नदिने, रेमिट्यान्सको आम्दानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र स्वदेशी लगानीकर्तालाई स्थानीय तहमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने जस्ता नीतिलाई स्थान दिएका छौं । यसमा देखिएका बाधा अड्काउलाई फुकाउन आवश्यक ऐन कानुनको निर्माण गर्ने विषयमा हामीले जोड दिएका छौं ।
लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिन्छ
डा. शिवजी यादव, प्रमुख सचेतक, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
राज्यले मधेसमा विभेद गरिरहेको छ । राज्यका नीतिहरू आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने खालका छैनन् । मधेसको विकासका लागि हुलाकी राजमार्ग महत्वपूर्ण छ । तर, त्यसमा ध्यान दिइएको छैन । राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । मधेसको विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त कमिसनतन्त्रको सञ्जाल समाप्त पार्नुपर्छ ।
संसद्भित्रका समितिमा सांसदहरूले विकासका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने विषय नै भ्रष्टाचारको मुख्य कारण हो । परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा कमिसनको खेलले समस्या भइरहेको छ । सरकारी परियोजनाका बारेमा जनतालाई जानकारी नै हुँदैन । कतिपय परियोजनाको कार्यविधिका बारेमा जनता जानकार हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा सही र कतिपय अवस्थामा गलत तरिकाले स्थानीय तहमा बाधा–अड्काउ उत्पन्न हुन्छ । यस्ता बाधा अड्काउलाई समाधान गर्न निर्वाचित निकाय खडा भएको छैन ।
पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिक तहमा एउटा सहमति भएको छ । त्यसअनुरूप सरकारले काम गर्न सक्यो र आन्दोलनरत पक्ष चुनावमा भाग लिने वातावरण बन्यो भने स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाउनेछन् । यति त्यो भएन भने भन्न गाह्रो छ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष कर्मचारीतन्त्र समावेशी छैन । कृषि, उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत कमी–कमजोरी रहेका छन् ।
त्यसलाई कानुन बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । देशमा लगानीको आवश्यकता छ । लगानी गर्न सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यी सबैका लागि राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक सहमतिमा परिमार्जनसहितको संशोधन आवश्यक छ ।
बजेट फ्रिज हुने समस्या मधेसमा छ । यसका लागि स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्वबीचको सहमति र कर्मचारीहरूको कमिसनतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संसदीय विकास कोषबाट भएका काम पनि कमसल खालको भएको गुनासो आइरहेका छन् । यसलाई समाधान गर्न कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
नयाँ वर्षमा राजनीतिक विवाद समाधान हुने विश्वास पलाएको छ । त्यसअनुरूप काम भए राजनीतिक दलका लागि आर्थिक एजेन्डा नै प्रधान भएर जानेछन् । कृषिक्षेत्रका विकास नीतिहरूलाई स्थायी बनाएर जानुपर्छ । मधेसमा साना–साना उद्योगको विकास गर्न सकिने सम्भावना धेरै छन् । तिनलाई नीतिगत रूपमा बढाउनु जरुरी छ । हाम्रो पार्टीले पनि यसबारे छलफल गरिरहेको छ ।
बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ
डा. उमाशंकर साह, अध्यक्ष , नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघ
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमति लिखित रूपमा आउन बाँकी छ । यो सहमतिले राजनीतिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्न सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सहमति नभाँडिएको अवस्थामा आर्थिक समृद्धिका लागि बजेट निर्माण र त्यसअन्तर्गतका स्रोत बाँडफाँडका विषय महŒवपूर्ण हुन्छन् ।
सरकारले निर्माण गर्ने बजेटको आधार तय गर्नुपर्छ, जसमा जनसंख्या, भूगोल, मानव विकास, गरिबीको अवस्थाजस्ता विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । बजेटमा मधेससँगको सम्बन्धलाई हेर्दा विभेद गरिएको देखिन्छ । मधेसमा कुल बजेटको १७–१८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको देखिन्छ । यसमा विदेशी सहयोगको वितरणलाई समायोजन गरी निकाल्ने हो भने यो प्रतिशत घटेर १३÷१४ को हाराहारीमा पुग्छ । यो बजेट निर्माणमा मधेससँग देखिएको विभेद हो ।
अहिले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका २२ जिल्लाको अवस्था हेर्दा कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशतको बसोबास छ । विकासको सुगमताका आधारमा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणका आधारमा बजेटको विनियोजन कुल बजेटको ३५÷४० प्रतिशत हुनुपर्छ । बजेट मात्रै छुट्ट्याएर पनि हुँदैन । उदाहरणका लागि मधेसका मुस्लिम र दलित समुदायमा शिक्षाको दुरवस्था छ ।
मुसहरको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको साक्षरता दर ७ प्रतिशत मात्र छ । यस्ता विपन्न र अविकसित अवस्थामा रहेका समुदायका लागि बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट आर्थिक समृद्धिमा बल पुग्छ । राजनीतिक दल विशेष गरी मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले ध्यान पु-याउनुपर्छ ।
आर्थिक विकासका लागि कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसअघि कृषिक्षेत्र आयोग गठन गर्ने तीनवर्षे योजनामा राखिएको थियो, तर अहिलेसम्म यो गठन भइसकेको छैन । मधेसको कृषिक्षेत्रलाई हेर्ने हो भने धान, गहुँ, आँप, उखु मुख्य कृषि पैदावार हुन् । यसका लागि विशेष क्षेत्र छुट्ट्याउनुपर्छ । मधेसको कृषिउपजका लागि आवश्यक खेतीयोग्य जमिन नष्ट भइरहेको छ । चुरे विनाशको सीधा असर मधेसको खेतीयोग्य जमिनमा परेको छ ।
यसका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो नगरिए कृषियोग्य जमिन नष्ट हुने पक्का छ ।
उद्योगको कुरा गर्दा सेवाक्षेत्र र वस्तुक्षेत्रको विषय अगाडि आउँछ । सेवा क्षेत्रको कुरा गर्दा भारतको सीमावर्ती प्रदेश बिहार र उत्तर प्रदेशमा पनि राम्रो विकास भएको छैन । सेवाक्षेत्र भन्नाले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्र पर्छन् ।
मधेसमा स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रको विकास विस्तार गरिए बिहार र उत्तरप्रदेशबाट सेवाग्राही आउन सक्ने अवस्था छ । यसका लागि मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले विशेष ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयको स्थापना मधेसमा गर्न सकिए भारतका विद्यार्थी आउनेछन् । यी प्रतिष्ठानका उत्पादन गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
गुणस्तर कायम गर्न सकिए मधेसमा सेवा क्षेत्रमा आधारित उद्योगको सम्भावना प्रचुर छ । यसका लागि राजनीतिक सहमति र द्वन्द्वको अवस्थालाई न्यून पार्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचन संविधान संशोधन मोर्चा भद्र सहमति